दुबईमा MBA रोजगारहरू दुबई र अबु धाबीमा फ्रेशर्स क्यारियरहरूको लागि
दुबैमा फ्रेशर्सका लागि एमबीए रोजगारहरू
दुबईमा मार्केटिंग कार्यहरू
दुबई शहरमा विदेशी रोजगार खाली ठाउँहरू
दुबई मा एमबीए नौकरिहरु
हामी भारतीय र पाकिस्तानको लागि एमबीए जरिवानाहरू भर्ती गरिरहेका छौं!
दुबई मा एमबीए नौकरिहरु सामान्यतया दुबईका हरेक दुबईको लागि हो। दुबई सिटी कम्पनी मुख्यतया मध्य पूर्व र जीसीसी मा भर्ती। हाम्रो भर्ती टीमहरूले एमबीए शिक्षाका साथ सल्लाहकारहरूको खोजी गरिरहेका छन्। धेरै को कारणले युएईमा काम खोज्दै। पहिले नै MBA शिक्षा भएका Expats।
सामान्यतया बोल्दै, वास्तविक विश्व भर्ती मुद्दाहरूको समाधानमा प्रभावशाली भूमिका खेल्दै। केवल त्यो उत्तम कम्पनीहरूले MBA शिक्षाको साथ व्यक्ति लिनेएन लामो दौडमा, सबैभन्दा उल्लेखनीयसँग चुनौतीपूर्ण दुबईमा संगठन रोजगारका लागि। अर्कोतर्फ, राम्रोसँग भुक्तान गरिएका कामहरूको लागि प्रस्ताव। नयाँ सम्भावित एक्सटेट कम्पनीलाई भर्ना गर्ने काममा राख्नु पर्छ। एक क्यारियरजेट नौकरी साइट.
खोजी मध्य पूर्वी क्षेत्र र विश्वभरि क्यारियरको लागि। एक परामर्शदाताको रूपमा, MBA को साथ तपाईंले एक अद्वितीय सीप विकास गर्न आवश्यक पर्दछ। धेरै भाग स्थानान्तरण योग्य एमबीए को रूप मा सेट। निश्चित रूपमा, अमूल्य साबित हुनेछ आफ्नो भविष्य क्यामेरा लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत। दुबई सिटी कम्पनीको टोलीमा सामेल हुनुहोस्। हामी नयाँ सल्लाहकार खोज्दै र संयुक्त अरब अमीरातमा सम्बद्ध छौं।
हामी अब एमबीए शिक्षाका साथ कार्यकारीहरूलाई काममा लगाइरहेका छौं दुबई कम्पनीहरू
के तपाइँ शिक्षा राम्रोसँग पहिचान गर्नुभएको छ? हामी अब भारतीय अधिकारियों को मदद गर्दछ लागि दुबई मा एमबीए नौकरिहरु। हाम्रो वेबसाइटमा आवेदन गर्नुहोस् र दुबई रोजगारहरूको लागि पुनःसुरु अपलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग पीएच.डी. शिक्षा वा सिमिलर प्रमाणपत्रहरू छन् जस्तै एमबीए। तपाइँ सुरू गर्न सक्नुहुन्छ मध्य पूर्वमा क्यारियर. अमीरातमा अचम्मको रोजगार खोज्नुहोस्। युएइमा सर्वश्रेष्ठ क्यारियर अवसरहरूको लागि पुनःसुरु पठाउनुहोस्। वा सीईओ बन्नुहोस् यदि तपाईंसँग एमबीए सम्पादन छ भने। संयुक्त अरब अमीरातमा काम गर्नुहोस्। आज सुरू गर्नुहोस् र दुबई शहर कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अर्को तर्फ, हेर्नुहोस् राक्षस भर्ती वेबसाइट। तिनीहरू साँच्चै तपाईंको CV सँग लागू गर्न लायक छन्।
कसरी दुबईमा रोजगार खोज्नुहोस् MBA को साथ?
वर्तमान समयका उम्मेद्वारहरू। समस्या समाधान गर्नका लागि अन्तिम विश्लेषणमा उत्साह देखाउने कसले। चाँडै वा पछि सार्थक परिणामहरू प्रदान गर्न व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य पाउनुहोस्। अग्रभूमिमा, हाम्रो कम्पनी दुबई मा छ। यी बिन्दुहरूलाई दिइन्छ, हामी कार्यकारीहरूलाई मद्दत गर्दै छौं। विश्वभरका शीर्ष स्नातक क्यारियर चाहनेहरूसँग सुरू गर्न। एमबीए शिक्षाको साथ वरिष्ठ अधिकारीहरुले व्यवसायिक रोजगारी खोज्नेहरूलाई।
धेरै जसो दुबई कम्पनीहरु एक Uber मा ड्राइविंग को लागी प्रतिभा र जोश संग मानिस खोज्दै। उही समयमा, हामी प्रबन्ध गर्दैछौं भारतीय तालिमका लागि दुबईमा एमबीए क्यारियर। ती परिस्थितिमा, नेतृत्व कौशल संग प्रबन्धकहरू। फलस्वरूप, मध्य पूर्व संगठनहरूमा परिवर्तन परिवर्तन गर्नुहोस्। यसलाई अर्को तरिका राख्न को लागी केहि रमाइलो पनि प्रयास गर्नुहोस्। एमबीए जागिरहरू खोज्ने बाटोमा।
MBA को साथ रोजगारी खोजी गर्दै? तपाईले गर्नु पर्ने भनेको सीधा ब्यापार मालिकहरूमाथि हिर्काउनु पर्छ। र त्यो गर्न सजिलो छैन। तपाईंले तिनीहरूलाई लिंक्डिनमा फेला पार्न र तिनीहरूसँग जडान गर्न आवश्यक छ। र त्यहाँबाट। तिनीहरूलाई अझ सुन्दर बनाउने तिनीहरूको दृष्टिकोणमा पुग्नुहोस् खाडीका कामका लागि आवेदन विवरण.
हामी दुबई को लागि एमबीए जर्बर्स संग ताजा को लागि मदद गर्दै छन्
दुबईमा एमबीए रोजगारी पाउन को लागी सजिलो छैन को महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ। र यदि तपाईं ठीक हुनुहुन्छ एमबीए संग स्नातक। र अवश्य पनि क्यारियर खोज्दै। तिमीलाई सम्झनु पर्छ। यो एक धेरै संदिग्ध कार्य हो। संयुक्त अरब अमीरातमा नयाँ क्यारियर पत्ता लगाउँदै। सामान्य रूपमा केवल एमबीए र कुनै पनि अनुभव संग बोल्दै। निश्चित रूपमा, समय लिनुहोस्।
अर्कोतर्फ, यदि तपाईं प्रत्येक दिन हेर्दै हुनुहुन्छ। दुबईमा नयाँ एमबीए खाली पदहरूको लागि। त्यहाँ एउटा जागिरमा पुग्न वास्तवमै सहयोगी विचार। ताजा स्नातकहरूको लागि आधारभूत लागूको साथ सुरू गर्नुहोस्। किनभने यस किसिमको रोजगार खाली ठाउँहरू खोज्न सजिलो छैन। भर्खर शिक्षा प्राप्त गरेका ताजा अधिकारीहरू। हुनु पर्छ रोजगारी आवेदनमा अधिक ध्यान दिनुहोस्। केवल किनभने तिनीहरूसँग पर्याप्त अनुभव छ। तर भर्खरै राम्रो मान्यता प्राप्त अनुभव पाउनुभयो।
दुबई शहरले एमबीएसँग फ्रेसरको लागि अद्भुत क्यामेराको अवसर प्रदान गर्दछ। जे भएपनि तपाईं कस्तो अचम्म हुनुहुन्छ। खोज्दै दुबई सिटी एरिया भित्र रोजगार सधैँ समय लिइरहन्छ। त्यहाँ थुप्रै कम्पनीहरू छन् जहाँ तपाईं जागिरका अवसरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रेसफर स्नातक विद्यार्थीको रूपमा आफ्नो CV पठाउँदै। तपाईं पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्कडिनमा
जागिर खोज्ने सबैभन्दा तेज तरिका। विशेष गरी एमबीए संग फ्रिज छ Google का लागि आवेदन गर्नुहोस्। उच्च प्रविधि कम्पनी र आईटी दुबईमा कम्पनीहरू। पागल कथा जस्तै बढ्दै छन्। किनभने दुबईमा 2020 एक्सपो सम्म, तिनीहरू तयार हुनु आवश्यक छ। तपाईको समय खेर नफाल्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको हातमा सीभी तयार हुनेछ जब तपाईलाई चाहिन्छ।
दुबई एयरपोर्टमा एमबीए कार्यहरू
एक उत्तम क्यारियर एयरपोर्टमा काम गर्दैछ। नियम र कर्तव्य बुझ्दै। माथि युएई क्यारियरको अनुभवका लागि सरकारी रोजगारहरू महत्वपूर्ण छ। त्यसोभए तपाईंको अनुभव के हो त्यो फरक पर्दैन। को दुबई एयरपोर्टमा एमबीए कार्यहरू सधैं खुला हुन्छन्। विशेष गरी ताजा स्नातक विद्यार्थीहरूको लागि। दुबईको एयरपोर्टमा। मानव संसाधन प्रबन्धकहरू संधै नयाँ उम्मेदवारहरु खोज्दै.
तपाईंले सीधा भर्ती व्यवस्थापनलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक छ। यो दिन तपाईले राम्रो रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै पाकिस्तान बाट प्रस्थान र भारत। MBA भएको र शिक्षाको साथ के गर्ने थाहा छैन। अवश्य पनि, तपाई स्थानीय विज्ञापनहरू खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। तर हामी जहिले पनि भन्यौं। युएईमा इमिरेट्समा काम गर्दै। तपाईं मध्य पूर्वमा पौराणिक बन्न सक्नुहुन्छ। धेरै मानिसहरू खोज्दै दुबईमा एक एक्सटेट बन्न तपाइँ यसलाई कसरी गर्ने भनेर थुप्रै गाइडहरू पढ्न पनि पर्छ।
सँधै निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँका अनुप्रयोगहरू बेग्लै छन्। सामान्यतया बोल्दै पनि साँच्चिकै खडा हुन्छ मोबाइल संस्करण भर्तीका लागि। निश्चित रूपमा MBA शिक्षा भएकोले तपाईंलाई राम्रो शिक्षित व्यक्ति बनाउँदछ। त्यसोभए तपाईको अनुप्रयोग भीडबाट अलग हुनुपर्छ। उच्च शिक्षित प्रवासीहरू जहिले पनि एक धेरै राम्रो शिल्प गरिएको रिजुमे अवश्य पनि, सबै भन्दा राम्रो CV सँग मानिसहरू काम छिटो खोज्ने। त्यो पक्का छ।
एमबीए संग रोजगार पाउन स्मार्ट तरीका नौकरी साइटहरू प्रयोग गर्ने हो। अधिक बजारहरू अनुसन्धान गर्न प्रयास गर्नुहोस्, धेरै मानिसहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। एमबीए संग रोजगार को लागी एमबीए छ जो भर्ती अधिकारी को खोज को छ। सामान्यतया, यसले तपाईंलाई रिपोर्ट निर्माण गर्न थप खुला ठाउँ दिन्छ। तिमी सक्छौ दुबईमा हायरिंग एग्जिक्युटिभ्स पत्ता लगाउनुहोस्.
एमबीए रोजगार दुबई को लागि पाकिस्तान को लागि
सधैं पाकिस्तान बाट प्रवासीहरु दुबई यात्रा। तिनीहरू मध्ये अधिकांश खोजी गर्दै एमबीए अफगानिस्तान दुबई को लागि ताजा। र सर्वोच्च सोच दुबईमा जागिरहरू यो सजिलो हुनेछ। वास्तवमा अमीरातमा नियोक्ताहरूले सामान्य रूपमा नयाँ एमबीए कार्यकारीहरू मनपर्छ। संयुक्त अरब अमीरात मा नियोक्ताहरु को लागि, त्यहाँ कुनै पनि कुरा छैन कि उनि कहाँ देखि आ रहे हो।
अर्कोतर्फ, तपाईं सीईओ पदहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, यदि तपाईं कम प्रबन्धन स्थितिको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा, तपाईंले स्थानीय बजारमा काम साइटहरू प्रयास गर्नुपर्छ। पाकिस्तानी जागिर खोज्न सक्छ दुबईमा वरिष्ठ व्यवस्थापन कार्य रिक्तिका लागि। यसबाहेक, यदि तपाईं राख्न चाहानुहुन्छ। एमबीए व्यवस्थापन भूमिका मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ। नयाँ ग्राहक अधिग्रहण र व्यापार विकासको लागि। एकै समयमा हाम्रो कम्पनीमा फेरि पुनः अपलोड गर्नुहोस्। र हामी तपाईंलाई संयुक्त अरब अमीरातमा नयाँ कार्यको लागि ठाउँ दिनेछौं। साथै, समीक्षा गर्नुहोस् कसरी सोशल मिडिया रोजगार खोज्न मद्दत गर्दछ.
अधिकजसो दुबईमा रोजगारी पाउने पाकिस्तानबाट बिदा। रोजगारदातालाई नयाँ व्यक्तिलाई व्यवसायमा स्थानान्तरण गर्न समस्या छैन। विशेष गरी यदि एक नयाँ व्यक्ति हेर्दै पोल्याण्डबाट दुबईमा प्लेसमेन्टको लागि। पछिल्ला वर्षहरूमा, टेक्नोलोजी बढेको छ। रोजगारदाताहरू र भर्तीकर्ताहरूको प्रबन्ध साक्षात्कार स्काइप मा अनलाइन।
एमबीए रोजगारी दुबईका लागि भारतीय
सामान्यतया बोल्ने भारतीयहरुको लागि एमबीए घट्टे पछि दुबई मा नौकरियां। तिनीहरू प्राप्त गर्न सक्ने उत्तम डिलहरूमध्ये एक हो। तपाइँले व्यवस्थापन स्थितिहरू प्राप्त गरेपछि। एमबीए अनुभवको साथ। भूमिकाले तपाईंलाई बनाउँछ दुबईमा नयाँ ग्राहकहरूको लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार। अर्कोतर्फ, तपाईंले अधिग्रहण र व्यापार विकासको लागि भाग लिनु आवश्यक छ।
दुबईमा कार्यकारीहरूको रूपमा। तपाइँले काम गर्नुपर्दछ नयाँ ग्राहक वा परियोजना र बजारको विकास। थप रूपमा, वरिष्ठ अधिकारी र निर्देशकहरूसँग सम्झौता गर्नुहोस्। सँगै शीर्ष 7star होटलहरु को दुबई मा। किनकि मुख्यतया संयुक्त अरब अमीरात मा मान्छे राम्रो होटल्स मा उच्च शिक्षा को आराम संग।
त्यस्तै तरीकाले हाम्रो उत्पादनको प्रबर्धनको प्रबन्ध गर्ने। बिल्डिंग र ब्रान्ड जागरूकता कायम राख्नुहोस्। वरिष्ठ अधिकारीहरु लाईन गतिविधिहरु को विकास को रूप मा। समान टोकन द्वारा कम्पनीको उत्पादन लाई सम्भावित लक्ष्यमा प्रमोट गर्दछ। संगठनमा व्यवसाय ल्याउन उल्लेख गर्नु पर्दैन। दुबईमा भारतीय नयाँ कामदार कडा परिश्रम गर्दैछन्। तर अन्य राष्ट्रहरू जस्तै दक्षिण अफ्रिकाहरू राम्रोसँग सशुल्क रोजगारीको काम प्रदान गर्दछ। खासकर अबू धाबी मा जहाँ सरकार नयाँ निवेश को प्रबंधन गर्दछ।
दुबई कम्पनीहरु नयाँ सीवीको लागि खुला छ। त्यसकारण, दुबई कम्पनीहरु मा भारतीयहरुको लागि नौकरिहरु को रिक्तियों निश्चित रूपमा खोलिएका छन्। यसलाई ध्यानमा राख्दै, हाम्रो कम्पनीले धेरै लेखहरू उत्पन्न गर्दछ। र हामीलाई आशा छ तपाईंले नयाँ आगन्तुकले युएईमा रोजगारी पाउनुहुनेछ हाम्रो सल्लाह को बिट पढेर।
जब एमबीए संग काम गर्दा इच्छित कौशल र अनुभव
उच्च गुणस्तर योग्यता उम्मेदवारहरू: एमबीए अधिवेशनले विदेशमा अध्ययन गरेको छ। उदाहरणका लागि बेलायती वा क्यानाडा वा युरोप। तथ्यको रूपमा, तपाईसँग कम्तीमा 1-5years हुनुपर्छ मार्केटिङ र सेल्स सेन्टरमा अनुभव एक वरिष्ठ कार्यकारी प्रबन्धकको रूपमा शुरू गर्न। प्राय दुबई कम्पनीहरू। मार्केटिंगको कडा ज्ञानको साथ बौद्धिक उम्मेदवारहरूको आवश्यकता छ।
जे होस् यो सत्य हुन सक्छ उत्तम व्यक्तिहरू ती हुन् जो दुबई शहर वरिपरि घुम्न तयार छन्। को लागी ठूला व्यापार परियोजनाहरु को प्रबन्धन। नकारात्मक पक्षमा, उम्मेदवारहरूले चिसो बोलावट गर्नुपर्दछ, डाटा संकलन गर्नुहोस् इत्यादि। साथै, तपाईंले सोच्नु पर्छ दुबई मा एक विश्वविद्यालय कैरियर। राम्रो शिक्षाको साथ नयाँ उम्मेदवारहरू स्कूलहरूबाट बलियो कामहरू प्रदान गर्छन्।
अर्को सेक्टर जहाँ तपाईं एक नौकरी पाउन सक्नुहुन्छ वित्तीय निगमहरू। The संयुक्त अरब अमीरातमा बैंकिंग कार्यहरू धेरै लोकप्रिय छन्। केवल नकारात्मकता हो तिनीहरू फेला पार्न सजिलो हुँदैन। र यदि तपाइँ तिनीहरूलाई लुई गर्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरू फिर्ता आउन सजिलो हुँदैन। राम्रो संचार कौशल र विदेशी एक्सपोजर एक थप फाइदा। बस यदि तपाईं चाहानुहुन्छ दुबईमा काम सुरु गर्न.
दुबईमा काम कसरी गर्ने??
ठीक छ, त्यसैले हामी अहिले राम्रो स्थानमा छौं। तपाईंलाई अहिले चाहिन्छ दुबईमा जागिर खोज्ने पत्ता लगाउनुहोस्। यो मनमा, तपाईं सात अमीरातको बारेमा केहि थाहा पाउन आवश्यक छ। The कामको लागि उत्तम स्थान दुबई बन्यो। र प्रत्येक व्यक्ति जो युएई भ्रमण गर्दछन्। तपाईंलाई भन्दछ कि त्यहाँ धेरै छन् संयुक्त अरब अमीरातमा रोजगार खोज्नका लागि थप स्थानहरू। त्यहाँ प्रसिद्ध अबू धाबी र शरिया छन्। यी सबै स्थानहरूमा तपाईंले निश्चित रूपमा रोजगारहरू पाउनुहुनेछ।
दुबईमा निर्यात गर्ने कम्पनी हाम्रो सल्लाहको सर्वश्रेष्ठ बिट मध्ये एक। सामान्यतया बोल्ने हाम्रो नजरमा छ भर्तीका लागि गाईड। किनभने संयुक्त अरब एमिरेट्समा रोजगारदाताहरू फेला पार्न उत्तम तरिका भनेको उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नु हो। तपाईंले रोजगारदाताहरूसँग कनेक्ट हुन आवश्यक छ र उनीहरूले तपाइँको पाठ्यक्रम vitae प्राप्त गर्नेछन् भनेर निश्चित गर्न। उदाहरण मध्ये एक संग सम्पर्क राख्नु हो मोटर वाहन भर्ती कम्पनीहरू। तपाईलाई के गर्न आवश्यक छ आफ्नो CV संग पप छ र निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरूले तपाईंको बिक्री भाषण देख्नेछन्।
त्यहाँ सम्पूर्ण मार्गदर्शक छ दुबई र अबू धाबी मा क्यारियर को लागि। हाम्रो कम्पनीले संयुक्त अरब एमिरेट्समा क्यारियर खोजी गर्ने बारेमा धेरै लेखहरू लेखेको थियो। तपाईंसँग केहि अनुभव र स्कूल शिक्षा हुनु आवश्यक छ युएईमा रोजगार को लागी। र हाम्रो कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले मानिसहरूलाई वास्तवमा सल्लाह दिइरहेका छन् दुबईमा काम कसरी गर्ने। तर यदि तपाइँ नियोक्ताहरूको लागि न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्न भने हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दैनौ।
जस्तै हामी राज्य प्रयोग गर्नुहोस् मुम्बई शहर मा गाइड र हाम्रो नजर राख्नुहोस् एमिरेट्स एयरलाइन क्यारियर गाइड। तपाइँ पक्कै तपाइँको लागी बहुमूल्य जानकारी पाउनुहुनेछ। पाकिस्तान र भारतीयका केही रोजगार खोज्नेहरू। पहिले नै धेरै संग भाग्यशाली छ कुवेत मा हाम्रो रोजगार गाईडहरु बाट रोजगार प्रस्तावहरु.
दुबईमा एमबीए काम कसरी छिटो बाटो पत्ता लगाउने?
ठीक छ, युएईमा रोजगारी पाउनको लागि सब भन्दा छिटो तरीका। लागू गर्नु हो दुबई वा अबु धाबी मात्र होईन। तपाईले विश्व भर बाट भर्तीकर्ताहरु लाई आवेदन दिनु पर्छ। उदाहरण को लागी, तपाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ सउदी अरबबाट भर्ती कम्पनीहरू। र अन्य जीसीसी देशहरू कतार र कुवैत जस्ता कामका लागि। एमबीए कार्यकारीहरू धेरै राष्ट्रहरूबाट बनाइएका छन्।
र संयुक्त अरब अमीरात मा सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्ति भारतीय, पाकिस्तानी र फिलिपिनो लोग जो दुबई मा काम गर्न को लागी देख रहे हो। र ती मध्ये धेरैले राम्रो स्थानहरू भेट्टाइरहेका छन् किनकि उनीहरू युएईमा धेरै लामो समयदेखि बाँचिरहेका छन्। जवाफ दिन दुबईमा कसरी काम खोज्ने छिटो तरिकामा सरल छ। तिम्ले पर्छ दुबई वा अबु धाबीमा काम गर्नुहोस् र बस्नुहोस् केही अनुभव प्राप्त गर्नुहोस् मध्य पूर्व नियोक्ताहरु बाट। र त्यसपछि नयाँ अवसरहरूको लागि खोजी गर्नुहोस्।
यो एक्कासी महिलाहरु को रोजगार को लागि मूल्यवान छ। विशेष गरी मध्य पूर्व को लागी। र वास्तविकतामा तिनीहरू छन् युएई कम्पनीहरूबाट अद्भुत क्यारियर अवसरहरू प्राप्त गर्दै। अवश्य पनि उच्च भुक्तानी भएको ज्यालाका साथ। किनभने महिला प्रवासीहरू व्यापार संरचनाको बारेमा धेरै ख्याल राख्छन्। विवरणमा ध्यान दिनुहोस् र कार्यमा सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न गर्नुहोस् जबकि संयुक्त अरब अमीरात मा। त्यस विषयको अन्त्यमा कृपया अर्को जाँच गर्नुहोस् हाम्रो ब्लगमा फिर्तीहरूको लागि सुझावहरू। हामीलाई ठूलो आशा छ कि यसले तपाईंलाई अवतरण गर्न मद्दत गर्दछ अमीरातमा रोजगार सपना.
एमबीए काम अय्यूबमा खोज्दै!
एउटा खोज्नुहोस् एमबीए दुबईमा काम खोज इन्जिन अचम्मको कुरा तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ।
बस एक सुरुवात गर्नुहोस् नयाँ क्यारियर दुबई!
पुन: सुरु गर्नुहोस् पृथ्वीमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो शहरमा! - दुबई सिटी कम्पनी अब शारजाहमा सहयोग गर्दै
दुबई शहर कम्पनी दुबईमा रोजगारीका लागि राम्रो गाईडहरू प्रदान गर्दै। हाम्रो टोलीले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको जानकारी थप्न निर्णय गर्यो Dubai दुबई। त्यसोभए, यो कुरालाई ध्यानमा राखेर, अब तपाइँ आफ्नै भाषामा संयुक्त अरब एमिरेट्समा गाईडहरू, सुझावहरू, र रोजगार पाउन सक्नुहुन्छ।